Siyavuyisana neKrisimesi ngeChristma eyilwe sithi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Pandora | | ngokubanzi
Ngeli xesha lonyaka kubalulekile ukwenza iKrismesi ukuthumela abathengi bethu ukuba bavuyisane nabo IKrismesi kwaye ndininqwenelela unyaka omtsha.
Lelona thuba lilungileyo lokuthetha nabo kwaye sikhumbuze abathengi abadala kunye nabatsha ukuba siyasebenza kwaye siyaqhubeka ukuyila. Yinkcukacha eya kuyivuyela.
Namhlanje, uninzi lweenkampani zikhetha ukwenza ifayile ye- Umbuliso weKrisimesi ithunyelwe nge-imeyile kuba ibandakanya inkcitho encinci, kodwa kusekho abantu abakhetha ukuqhubeka nokuthumela kunye nokufumana ikrisimesi yeklasikhi eprintiweyo ephepheni.
Okokuqala khetha ukhetho lwakho, kwaye wakuba ugqibe kwelokuba omnye wabo ehle aye emsebenzini kwaye Uyilo eyakho. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba kufuneka ibandakanye eyakho logo kwaye uyihloniphe mfa nekiso. Ungabandakanya ukufotowa, mze keliso, okanye iklip yevidiyo ukuba ithumela i-imeyile.
Ungabandakanya Siyavuyisana kweyakho iphepha lewebhu Kwiphepha lasekhaya, apha amathuba okuhamba kunye nesandi abanzi kakhulu, kodwa uhlala ucinga ukuba ulujonga uhlobo lwabantu ojolise kubo.
Olunye ukhetho kukuzinikela kwiinkampani ezahlukeneyo ukwenza eyakho Ikhadi leKrisimesi. Kwimeko apho, kuya kufuneka uyazi umgaqo-nkqubo wenkampani kwaye uziqhelanise nayo xa isiza uyilo. Akucetyiswa, umzekelo, ukwenza UChristma ngokuhamba kakhulu kunye nomculo ukuba uyila inkampani emele ubuhle kunye nokunambitheka okuhle, into epholileyo iya kuba yeyona ilungileyo kule meko.
Imifanekiso: ii-machoarts, navidad
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Siyavuyisana neKrisimesi ngeChristma eyilwe sithi
Molo ndifumene usetyenziso oluneevidiyo ezinje http://bit.ly/tj1U6q kunye nezakudala ze-ElfYakho! Nge-intanethi ngoku kulula ukufumana imibuliso ehlekisayo!
IiLogo zokukukhuthaza ukuba uzalise ngokupheleleyo